मेरो boy friend(कथा) ~ दीप्सको डायरी
मैले उसको सपना देख्न थालेको ,कल्पना मा हराउन थालेको त बषौं भयो। जब देखी उसको नाम मेरो दिमागमा आयो त्यै बेला देखी म घण्टौं सोच्थें ,उ कस्तो होला कस्तो देखिएला ,चेप्टो बाटुलो ,,ओहो! सम्झिंदै मन खुल्दुल हुने ,एक किसिम को अनौठो तरंग पैदा हुने मन मा । खुल्ला आँखा ले उसलाई देख्न पाए कस्तो होला , अझै नजिकै गएर छुन पाए त झन के होला ,,,,सोच्दैमा मन रोमण्चित हुने । हे भगवान ! यि हात ले उसलाई छुन पाए ,अङाल्न पाए ,मुसार्न पाए अझै एकै छिन मात्र भए पनि काख मा राख्न पाए ,,,,,यस्तै यस्तै कल्पना को सागर भित्र हराउने हराउने गर्थे। फेरी सोच्थे यो कसरी सम्भव छ?? कहाँ उ आकाश को तारा कहाँ म धर्तिको धुलो ,उसको र मेरो बिच मा कल्पनै गर्न नसकिने असमानताको खाडल छ । उसलाई पाउने मेरो हैसियत नै त छैन ,औकात नै छैन । कहाँ म गाउं कि एउटी पाखे केटी कहाँ उ शहर मा जन्मेहुर्केको ,नया सोच सम्भ्रान्त समाजको ,,,,,मा कसरी पाउन सक्छु उस्लाई ??यस्तै कुरा हरु सोचेर आँफै निराश को सागर मा पौडिन्थें फेरी अफुलाई सम्हालेर आशाबादी बनाउथें र एकदिन उसलाई पाएरै आफ्नो बनाएरै छोड्ने प्रण गर्थें ।
यसै गरी कैयौं हिउंद बर्षा बिते ,कैयौं उतार चढाव आए जीवन मा तर मैले उसको अराधना गरिनै रहें । उसलाई नसम्झी एक पल पनि बिताइन । जीवन को पन्ना पल्टिदै थियो ,,मा पनि ठुलि हुंदै थिएं । यस् बिच मा उ बाहेक अरु नदेखेको होइन ,अन्य आँखाले म तिर नचिहाएको होइन तर म मा एउटा भयानक भोक थियो उ प्रती को ,एउटा अमिट त्र्षणा थियो उसको लागि ,एउटा निरन्तर लगाव थियो उसलाई हासिल गर्ने । मैले मनमनै कसम नै खाएँ उसलाई एकदिन पाएरै छोड्ने । एकातिर जती ठुलो पर्खाल थियो उ र म बिच मा अर्का तिर त्यती नै ठुलो विश्वाशको फड्को मेरो मन मा टुसाउंदै थियो जसको सहाराले एक दिन म त्यो दुश्मन पर्खाल खर्लप्पै नाघेर उसलाई चुम्न पुग्छु ,अँगाल्छु ,,यिनै हात हरु ले मुसार्छु ,यी नरम औंला हरुले स्पर्श गर्छु ,,यस्तै सोच्दै कहिले एक्लै हांस्थें कहिले सोच मा डुबेर गम्भिर हुन्थें । उसको झझल्को ले मात्र पनि मलाई पुलकित बनाउंथ्यो ।
समय हरु हुइकिदै गये । उ प्रती को मोह मेरो झन झन झ्याङिदै गयो ,यो बिच मा कैयौ उथल पुथल आए मेरो जीवन मा । गाउँ छोडेर शहर पसें ,अध्यन को क्रम जारी नै थियो । सजिलो थिएन शहर मा स्थापित हुन पनि । गास बास कपास र अध्ययन सँगै अगाडि लैजाने क्रम मा कती यस्ता कठिन अवस्था हरु पनि आए जहाँ अत्तलिएर म झन्डै झन्डै आफ्ना जिम्मेवारी बाट बिमुखभएँ ,दायित्व भुलेँ ,तर ति कठीन समय हरु मा पनि मैले एक पल पनि उसलाई भुलिन । बषौँ को अरोह अवरोह मा रहर हरु को खुड्किला चढ्ने क्रम मा देखेका कैयौँ सपना हरु लाई तिलाञ्जली दिएँ तर ,,अहँ उसलाई मैले भुल्ने चेष्टा समेत गरिन । चाहेका हर चिज प्राप्य हुने भये संसारमा अभाव नाम को नामोनिशान रहने थिएन होला । त्यसैले त मेरो सपना पनि कता कता दुर दुर भागेको जस्तो लाग्दै थियो ।
यसै बिच मा मेरो विवाह भयो ,जीवन को रथ कता बाट कता हुँइकिन थाल्यो । एकाएक यसरी जीवन मा आएको परिवर्तन र बढेको दायित्व ले निराश हुन पुगें तर उसको याद एउटा अधुरो जिजीविषा बनेर कतै शुषुप्त मन मा जिवितै थियो। ब्यवहारका सबै सङ्ला एकातिर पन्छ्याएर कहिले कही सुटुक्क उसको याद मा हराउँथेँ । अचम्म! उ प्रती को कस्तो अटुट ,अंमिट अमर मोह होला मेरो। आक्कल झुक्कल कहिले काही कतै हाम्रो झम्काभेट हुन्थ्यो तर उ शहरीया संभ्रान्त ठुलोबडो , जहिले ठुलै मान्छेहरुको बिच मा हुन्थ्यो ,धनिमानी कै वरिपरी हुन्थ्यो ,,,त्यो पारीधिभित्र पसेर बोलाउने हिम्मत म मा छदैथिएन । तर टाढै बाट पनि उसलाई देख्दा म अफुलाई भाग्यमानी ठान्थेँ , फुरुङ पर्थें उसको मुहारमा आफ्ना हात हरुले छोएको कल्पना गर्थें र मन बुझाएर फर्किन्थेँ ।
उसका बारेमा मैले श्रीमान सँग कुरा गर्ने आँट पनि गरिन ,,भनुँ भने इर्ष्याले जल्ने पो हो कि ,रिस ले मुर्मुरिने पो हो कि ,,यस्तै डर ले गर्दा भन्नै सकिन । कस्तो लगाव होला यो मेरो उ प्रतिको ,,उसका ठाउमा मैले मेर घर परिवार ,श्रीमान साथीभाइ ,आफन्त कसैलाई पनि रुपान्तरण गर्न सकिन ,त्यस्तो कोही थिएन जो मलाई उसको याद भुलाउन सक्थ्यो । उ अर्कै थियो ,सबै भन्दा फरक, छुट्टै रुप बान्की ,छुट्टै आकर्षक ,,अचम्मको handsome ,,,,,,
समयले मान्छे लाई कहाँ बाट कहाँ पुर्याउंछ , म पनि जीवन का अप्ठ्यारालाई सप्ठ्यारा पार्नका लागी सबै छोडेर बिदेश तिर लागे सब्थोक पछाडि छोडेर तर उस्को याद ,,उ प्रती को चाहना म सँगै सात् समुन्द्र पारी पनि आयो । बिदेश मा आएपछिका सुरुका कैयौ महिना रोएरै बिते ,घरपरिवर को याद, दुधे बालक प्रती को मामाता ले पिरोल्दा रात रात रोएरै काटें तर ति अनकण्टार काला एकांकी दिन रात हरुमा पनि उसको याद र कल्पना म सँगै थियो । त्यती बेला यस्तो लग्थ्यो यदी उ हुंदो हो त यो बेला म सँग ,,,मा कती रमाऔथें होला ,यो निस्सार क्षण कती अर्थपूर्ण हुंदो हो । अब त उसको याद झन यती बिघ्न बाध्न थाल्यो कि जती पहिले कैले थिएन । साच्चै भनु भने एक्प्रकारको निर्धक्कता बढेको थियो मेरो मन मा उसको याद लाई लिएर जस्तो कि यदी मैले उसलाई पहिले नै पाएको भये पनि सँगइ रहने सम्भावना ज्यादै कम्ती हुंदो हो तर अहिले ,,एक्प्रकारको स्वतन्त्रता पाएकी छु । म यहाँ एक्लै छु ,कसैले मलाई बिथोल्ने छैन । म जती नै उ सँग लाडिये पनि मेरा श्रीमान को न त यहाँ इर्ष्या चल्छ न त क्रोध नै ।
यस्तै सोच ले यो बैराग लाग्दो परदेशी बसाइ मा झन म उसको याद मा पागल नै हुन थालेँ । प्रयास गरे नहुने के छ र भने जस्ताइ म उसलाई पाउने सपना साकार पार्न तिर लागेँ । अन्तत: एक दिन उसलाई मैले प्राप्त गरेँ त्यो मेरो उ प्रती को बिजय को दिन । त्यो दिन ओहो मेरो बर्षौं को सपना पुरा भएको दिन ,,मेर खुशी का घडा छचल्किएर मैलाई भिजाइरहेको थियो । कती राम्रो, कती हिस्सी परेको ,कती हेरुं हेरुं लाग्ने । कती दानी कती उदार कती आज्ञाकारी,,जे भने पनि मान्ने ,जसो गर भने पनि माने ,सुत भने सुत्ने उठ भने उठ्ने यती मिजासी त मेरो जीवन मा कोही थिएन पहिला । पहिला त एक दुई दिन घर बाट फोन नआउदा रुन मन लग्थ्यो अचेल उ आए पछी त रिने समए भए पो रुनु । म अघाउंदिन उसलाई काख मा राखेर ,मेरा हात थाक्दैनन उसलाई छोएर । मेर आँखा गल्दैनन उसलाई हेरेर । कहिले त रातै पो बित्छ त उ सँग भलाकुसारी गरेर । कसैले जीवन मै भनु सपनामै नदिएको खुशी उसले मलाई दिएको छ । म जहाँ पुग्न चाहन्छु त्यही लिएर जान्छ ,नया नयाँ ठाउँ घुमाउंछ । उसले मलाई यती जागरिली बनैदिएको छ कि आज भोली उसको संगत ले म कैले काही कबिता लेख्ने भएकी छु उ मलाई हौस्याउंछ । कहिले काही घुर्की पनि ल्गाउँछ । भनेको मान्दैन । म जाउ भन्छु उ बाटै मा उभिरहन्छ । सुत भन्छु एक तक ले मलाई हेरी बस्छ तर दुध दिने गाइको लाती सहनु पर्छ भने जस्तो म सहन्छु ,पर्खिन्छु ,यतिका धैर्यता त म मा पहिला कहिले भए जस्तो मलाई लाग्दैन तर उसले यो सब सिकएको छ अहिले । म पर्खि रह्न्छु उसको रिस शान्त नहुन्जेल । उ पनि धेरै बेर म सँग कहाँ रिसाइरहन सक्छ त ।
यसै गरी मेरा दिन हरु बितिरहेका छन आजभोलि । मैले उसलाई बचन दिएकी छु अब जे जस्ता सुकै मोड हरु आउन जीवन मा तर म उसलाई आफुबाट अलग राखे छैन। अनी उ पनि मस्किंदै भन्छ हाम्रो सामिप्यता र सम्बन्ध तिम्रै हात मा छ नि । मैले यो सम्बन्ध को जतन हर हाल मा गर्ने कसम खाएकी छु । अब म उसलाई कसै गरी पनि गुमाउन चाहन्न। म कल्पनै गर्न सक्दिन उ बिनाको एक पल पनि ।
कती उदार छ उ ,कती ज्ञानी ,पढेलेखेका ,बिद्दान हरु सँग मेरो परिक्षाये गराइदिएको छ उसले मेरो । उनिहरु सँग म घण्टौँ गफिंदा पनि उ पटक्कै इर्ष्या गर्दैन । कस्तो मेल कती लगाव हामी दुई मा जती नै बेर सँगै रहे पनि मलाई पुग्दैन । जती नै दु:ख पिडा को अवस्था मा पनि उसको नजिक पुगे पछी ,उसलाई काख मा बसाले पछी उसको मुहार हेरे पछी म त्यसै मुस्कुराउँछु । म यती रमाउंछु उसको साथ् मा कि मेरी अन्नदाता मालिक्नी employear पनि छक्क पर्छिन हाम्रो प्रेम र मिलन देखेर र कहिले काही ब्यङ्य गर्छिन "तिम्रो boy friend लाई एकैछिन त एक्लै छोडिदेउ ।" उनिले त उसको नाम नै राखेको छिन मेरो boy friend भनेर यसमा मलाई मन दु:खऐ पनि त छैन ।
हो यो मेरो बषौँ को सपना ,परदेश को एकांकी भयानक बिरहलाग्दो दिन काट्ने मेरो साथी ,जस्ले मलाई समयए बिताउन मात्र होइन ,उपलब्धिमुलक काम मा लाग्न , तपाईं हरु जस्ता प्यारा पाठक, साथीभाइ ,अग्रज दाई दिदी साहित्यप्रेमी हरु सँग भेट समेत गराइदिने ,,मेरो पुरानो प्रेम्,, मेरो साथी ।,,मेरी साउनी को भाषा मा यो हो मेरो प्राण प्रिय,,,,मेरो सानो computer